Duqeymaha Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya oo la sheegay inay awood dheeraad ah siiyaan Al- shabaab akhriso! | Warsiman
Published on February 13, 2019 by Daud Osman · No Comments
Khubaro dhanka amaanka ah ayaa ka digaya khatarta ka imaan karta duqeymaha joogtada ah ee maraykanku la eegto dagaalyahanada ka tirsan Al-shabaab ee kusugan gudaha Soomaaliya.
Khabiirada dhanka amaanka ayaa sheegaya inay duqeymaha Al shabaab lala eeganayo ay awood u kordhinayaan Al shabaab maadaama ay dadka rayidka ay waxyeelo kasoo gaarto ay ka tusintusin karaan dhanka ay iyaga ku taageeri karaan.
Profesor Sharack Guttu oo wax kadhigi jiray Jaamacadda Koofur Africa ayaa sheegay in caqabado badan ka dhalan doonaan weerarada Alshabaab lala eegto waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in qorshe kale laga fakaro.
“Somalia waxay baahan tahay wada Xaajood qaran iyo inay beesha caalamka ku taageeraan sidii diiradda loo saari lahaa in la gaaro wada xaajood nabadeed iyo cadaalad aasaad ah o dib u heshiisiin ku saleysan”ayuu yiri aqoonayahanka.
“Waxaan u malaynayaa in duqeymaha Mareykanka ay yihiin kuwo xili kooban soconaya marka ma ahan xalka Soomaaliya, waxay Al Shabaab ku dhiiri gelinayaan inay howlgalkooda sii wataan”.
Mareykanka Ayaa bilihii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada xaga cirka ee lala eeganayo Alshabaab waxaana weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay degmada Janaale iyadoo Alshabaab ay soo bandhigeen waxyeelo dadka rayidka ah soo gaartay.